Ciidamada Puntland oo kusii durgaya magaalo xeebeedka Qandala - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada Puntland oo kusii durgaya magaalo xeebeedka Qandala
December 6, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Gaari gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada Puntland oo maraya buuraha Galgala ee gobolka Bari. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Puntland ayaa ku sii durgaya duleedka magaalo xeebeedka Qandala ee gobolka Bari, sida ay ilo-wareedyadu sheegayaan.
Ciidamada Puntland ayaa sheegay in khasaare badan oo nafadeed ay u geysteen maleeshiyada ISIS maalintii kowaad ee howlgalka.
Shalay oo Isniin ahayd, ciidamada dowladda ayaa gacanta ku dhigay dooxada Obolohe, taasoo kutaala duleedka Qandala.
Qiyaasta tirada dagaalyahanada ISIS ee ku sugan Qandala waa kala duwantahay, intooda badan khuburada milatarigu waxay dhigayaan in ka badan 100, laakiin kuwo kale ayaa leh waa ilaa 300.
Howlgalka milatariga ee Qandala ayaa waxaa hoos u dhigay miinooyinka dhulka, oo ay wadooyinka waa-weyn ku aaseen dagaalyahanada ISIS, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada.
Howlgalka ISIS dib looga qabsanayo Qandala ayaa bilaabmay qiyaastii asbuuc kahor. Maleeshiyada ayaa qabsatay magaalada bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar ee sanadkan.
November 28, 2016 Puntland oo u diyaargaroobaysa sidii ay magaalo xeebeedka Qandala dib u gala wareegi lahayd ISIS
December 4, 2016 Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada ISIS oo ka qarxay meel u dhow magaalo xeebeedka Qandala
November 1, 2016 Puntland oo boqolaal katirsan ciidamadeeda u dirtay magaalo xeebeedka Qandala si ay ula dagaalamaan maleeshiyada taageersan ISIS
December 3, 2016 Puntland oo sheegtay in ciidamadeedu ku dileen gobolka Bari ugu yaraan todobo maleeshiyo oo ISIS ah
Puntland forces advance on Qandala coastal town
Waqooyiga Kuuriya oo weerar kumbuyuutarada ah ku qaaday taliska milatariga Koonfur Kuuriya
Roobow oo iska indho-tirayaa go’aanka Wasaaradda Amniga DFS ee ka mamnuucaya doorashada maamul goboleedka Koonfur Galbeed
Baydhabo-(Puntland Mirror) Mukhtaar Roobow Abu Mansuur ayaa sii xoojiyay ololihiisa madaxtinimada maamul goboleedka Koonfur Galbeed kadib markii Dowladda Federaalka Soomaaliya sheegtay in uusan u tartami karin xilkaas. Mansuur oo horey uga tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab, ayaa [...]
Vacancy: Executive Director
Somali Institute for Development Research and Analysis (SIDRA) is a registered independent, not-for-profit research and policy analysis Think Tank based in Garowe, Puntland State, Somalia. The institute is a knowledge-policy interface established to fill the [...]
Madaxweyne Farmaajo oo kulan la yeeshay xubno ka socda xildhibaanada taageersan guddoomiye Jawaari
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Sabti ah Muqdisho kulan kula yeeshay xildhibaano taageersan guddoomiye Maxamed Shiikh Cusmaan Jawaari, sida ilo-wareed kulanka ka ag dhow uu warbaahinta u sheegay. Madaxweynaha iyo [...]